Iindaba -Ukubuya kwe-IC kunye nekhowudi ye-chip
IC reverse kunye chip ikhowudi khipha
Kwi-IC reverse kunye ne-chip's khipha isicatshulwa, i-Shenzhen Sichi Technology Co. LTD. ukubonelela ngezi nkonzo zilandelayo:
Uhlalutyo lwecandelo le-IC
Kwi-chip reverse yobunjineli, uluhlu lomnatha / ukuhanjiswa kwesazobe ngumsebenzi obaluleke kakhulu. Uluhlu lomgangatho wokukhupha uluhlu kunye nesantya ngokuthe ngqo zichaphazela ukugqibezela ngasemva, ukulinganisa kunye ne-LVS kunye neminye imiba yomsebenzi. I-Sichi Technology kuphando lwexesha elide lobuchwephesha lushwankathelwe ngempumelelo kuseto lweendlela kunye neendlela, umgangatho ophezulu wokukhutshwa kweentlobo ezahlukeneyo zoluhlu lweesekethe.
Nge-FIB kwindawo ekhethekileyo ye-IC yendawo enesiphambeko secandelo, icandelo elinqamlezileyo lolwakhiwo kunye nezinto eziphathekayo, uhlalutyo lwenqaku elimiselweyo lesiphene sesakhiwo. Oku kunokunceda abaqulunqi be-IC kuhlalutyo lwendlela yokusebenza kwe-IC.
Uhlalutyo luluhlu lomnatha / ukukhutshwa kwedayagramu yesekethe kunye nomsebenzi wokucinga
Uyilo loyilo kukufezekiswa komzimba kwengqondo yesekethe, kukufezekiswa kweemveliso zesekethe ezihlanganisiweyo. I-Sichi Technology kuyilo olungagungqiyo kwisiseko sokumiswa kokukhutshwa, inkqubo yokutshintsha ilayibrari, utshintsho kwinkqubo ekujoliswe kuyo, ukuhlolwa kweDRC kunye nokulinganiswa kwe-LVS kunye nezinye iinkonzo zoyilo.
Sebenzisa i-FBI ukuguqula umgca we-IC
Uguquko lomzimba wesekethe ye-chip kunye ne-FIB ivumela umyili we-chip ukuba avavanye ingxaki ye-chip ukuze aqiniseke ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ngakumbi kuyilo. Ukuba kukho ingxaki ngendawo ye-chip, inokumiswa yodwa okanye ilungiswe yi-FIB Le ndawo inezinto ukuze ufumane i-crux yengxaki.FIB nayo kwimveliso yokugqibela ngaphambi kokubonelelwa kweesampulu kunye neefilimu zobunjineli, Ukusetyenziswa kwezi sampuli kunokukhawulezisa ixesha lokuphela kwemveliso kwintengiso. Sebenzisa i-FIB ukuguqula i-chip kunokunciphisa inani lotshintsho olungaphumelelanga kuyilo, Ukunciphisa ixesha lophuhliso kunye nomjikelo. Ukuze i-chip ichaze umthengi, unokuwuguqula umgca ukuze ufezekise isiphumo sokuchithwa.
Kwi-microcontroller, i-CPLD, i-FPGA kunye nolunye uhlalutyo oluhlengahlengisayo kunye nokhuseleko.
Kwi-microcontroller kunye ne-CPLD kunye ne-FPGA chips ezinje ngokuhlalutya kunye nokuvavanya, ukubuyisela umva ikhowudi kunye novavanyo lovavanyo lomngcipheko.
Uhlalutyo lomsebenzi wokuqonda
Emva kokuphela kokukhutshwa kwoluhlu lomnatha, uhlala ufuna ukwenza umsebenzi wokugqiba wesekethe, isekethe ethe tyaba ukulungisa ukubekwa kwesekethe yesakhiwo esine-hierarchical ukuze uqonde iingcinga zoyilo loyilo kunye nobuchule, kodwa kunye fumana uluhlu lomnatha Injongo engalunganga. Itekhnoloji yeSichi ngokuhamba kwamanqanaba ohlukeneyo emodyuli yokugqiba kunye nohlalutyo, hayi kuphela ukuqonda ngokupheleleyo izimvo zoyilo lomyili we-chip kunye nezakhono zoyilo, kodwa kuhlalutyo kunye nesishwankathelo semibono yoyilo oluphambili esekwe ekufezekisweni kobuchule babo bokuyila .
Okwangoku, ngenxa yophando lwasekhaya kwicandelo loyilo oluhlanganisiweyo lwesekethe lubuthathaka, uhlalutyo lwe-chip reverse lube sisininzi seenjineli zesekethe ezihlanganisiweyo ngokusekwe kwisekethe yokwenyani yokuqokelela amava ngendlela efanelekileyo, uyilo oluguquliweyo lwe-IC kukukhuthaza uyilo lwesekethe oluhlanganisiweyo lwasekhaya kunye neendlela ezifanelekileyo.